We Fight We Win. -- " More than Media ": မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ချုပ်မှ အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
လုတ်ခြင်ရာ လုတ်ပြီ အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ရုံနဲ ရဟန်းသံဃာတော်တွေစိုသူတွေရဲ့ သိက္ခာပြန် တင်နေကြတာလားဗျာ၊ မြန်မာပြည်ရဲ လူမျိုးခြား ဘာဘာခြားတွေရဲ့ သာသနိက အဆောက်အအုံတွေကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်များစွာ ဖြက်လိုဖျက်ဆီးလုတ်နေတဲ မိုက်ရိုင်းထွားကြိုင်းသော ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို ဥပဒေရှေမောက်ကို ရောက်အောင်ပိုဆောင်းပေးသင့်တာ၊ အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြီ သိက္ခာမတင်ကြနဲလေ၊ (ထိုင်း)နိုင်ငံသည်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာစည်ပင်ထွန်းကားသောတိုင်ပြည်ဖြစ်သော်လည်း (ထိုင်း)နိုင်ငံ၏ ရဟန်းသံဃာတော်များသည် လူမျိုးခြား ဘာဘာခြားတွေရဲ့ သာသနိက အဆောက်အအုံတွေကို ဖြက်လိုဖျက်ဆီးခြင်းမပြုပါ၊ ခုမြင်တွေရတဲ့ အသိပေးကြေညာစာကလည် အရှင်ပဏ္ဍဝံသ၏ တစ်ဦးတည်သော် အသိပေးကြေညာစာဖြစ်နိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ချုပ်မှ အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်မတူပါ။
who cares 99% of Buddhist Myanmar are happy to hear Muslim temple are destroyed even though we can't say officially.
We indirectly support kill all muslim movement. :)
agree..muslim doesnt deserved to be in human kind